Geeddigii koowaad iyo Guuleed
n.a., Stockholm, 2005
Buuggan la magacbaxay "Socdaalkii dheeraa" waa buug xanbaarsan dhacdooyin dhab ah. Sannadkii 1988-kii ayuu dagaal ka bilaabmay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Dagaalkaasi wuxuu si naxariis darro ah u dhex maray ciidamadii SNM iyo ciidankii daacadda u ahaa Maxamed Siyaad Barre oo ilaa 1969-kii ka talinayey Jamhuuriyaddaii xilligaa la odhan jiray "Jamhuuriyadda Dimoqradiga Somaliya".
Hadaba buuggani wuxuu salka ku ahayaa dhacdooyinkaas soo maray dadkii deggenaa deegaanadii dagaaladu saameeyeen. Guuleed oo ahaa xilligaa nin dhallinyaro ah oo dhammaystay dugsigii sare, deggnaana magaalada xeebta ku taalla ee Berbera, wuxuu lasoo kulmay dhibaato farabadan. Guuleed iyo saaxiibadii waxay ka soo baxsadeen markii ay u adkaysan kari waayeen dhibaatadii iyo caga-juglayntii ay ku hayeen ciidankii loo yaqaanay "Faqashta" oo daacad u ahaa keligii taliye Maxamed Siyaad Barre. Socdaalkaasi wuxuu ku qaatay Guuleed muddo ku dhow saddex sannadood.
Qaabka xidhiidhka sheekada waxa allifay qoraaga. Waase sheeko salka ku haysa dhacdooyin run ah. Buuggani wuxuu ku xasuusinayaa qaabkii nololeed ee magaalada Berbera loo noolaa markii dagaalku ka bilaabmay magaalada Burco 27-05-88. waxaad kaloo ka dheehan kartaa deegaankii uu soo maray Guuleed iyo noloshii taallay. Qaxootigii Dulcad oo uu Guuleed muddo degganaa ayaad sawir guud ka helaysaa. Dagaaladii foodda lays daray iyo sida dhegta dhiigga laysu daray ayaad ka halacsanaysaa buuggan.
Buuggan waxa qoray Sayid Maxamed Yusuf "Dhegey. Waa qoraagii qoray buuggii lamagacbaxay: Somaliland: xorriyaddii lixdankii iyo xilligii ka horreeyey.
Akhriste - 2011-08-15 07:30:46
mukhtaar - mukhtaar0@hotmail.com
sxb horta waad salaamantihiin salaan kadib waa ceeb inaad dad tiraahdaan faqash ilaahay ka cabso oo ilaahay u noqo dadku waa walaalo dawlad khayr qabtana aan ilaahay ka barino ee maaha in layiraahdo waa dawladii faqashta ceeb shame your self please
Akhriste - 2011-04-19 15:28:03
Ahmednasir - togwajaale1@hotmail.com
buugaag aad u xiiso badan oo aan aad u jeclaystay ayaa ku jirta ee sideen ula dagi karaa wad mahadsantihiin
Akhriste - 2009-04-09 07:32:22
cabdi baasid aadan cabdi - europeansystem@hotamail.com
waxa aan rabaa in aan halkan ka sheego in buugtan oo kale aan jeclaan lahaa in somaliland lagu soo badiyo waayo faa iido waxa uu u leeyahay arday kasete iyo qof kaste oo cilmi doon ah in ay ka caawin doonto meelo kale
Akhriste - 2009-03-22 01:20:00
Ahmed - staff571@hotmail.com
marka hore waan idin salaamayaa dhamaan dadkii qoray boogan Afsomaliga ah waanad ku mahad santiin xagee ku qoray yaha adventage of book in waxanan idin leeyahay halkaa ka sii wada walala yaal,my email si staff571@hotmail.com phone+002522
Akhriste - 2008-10-21 09:42:32
aadan f cige - aadan_afc@hotmail.com
waaa buug ah buugta loo baahanyaay ee taariikhda iyo xusuusta ah iyo ina la ilaaliyo ayaamaha la soo maro markaa waxaan leeyahay qoraag waxad u qabatay bahda ku hadasha afka somaliga qayb ay u baahyeen waxanan ku leeyay taariikhdu duug ma leh
Akhriste - 2008-01-07 14:51:15
Saeednasir - timocadee@yahoo.co.uk
Runtii aad baan u jecleystay inaan buugan akhristo iyo kuwa kale ee qoraaga Sayid uu qoray
Akhriste - 2006-09-03 13:44:28
xasan c/laahi cali - xasanbiitir@hotmail.com
marka hore salaan qaali ah sayida axmed walaalo koley buuga wax hore akhrin ah kama hayo lakiin hatta ayaan jeceley in aan akhriyo markaasi waxaan rabaa halka laga hello london ama uk si aan kula soo xidhiidho ama tellefoonka qofka lagal soo xidhiidhi karo ee jooga londom. qoraaga waad mahad
Akhriste - 2006-07-18 20:08:00
A mohamed - abusalma@hotmail.com
waxay ila tahay inay ka mudnaan lahayd in firxadkii qurbaha lagu yimid, iyo dhibta lagala kulmay laga qoro tan oo kale.
Akhriste - 2006-04-25 19:30:44
wiil somali - daaweeye@hotmail.com
abwanka waxaan ka codsanaya in uu i hadiyeeyo buugaan si aan uuga faa iidaysto
Akhriste - 2006-03-27 00:01:33
cabduqaadir xuseen rooble - indhadiir7@hotmail.com
waxaan aad uga helay buugaagta ay qoreen qoraayaasha soomaalia ee ka sheekeynaya sooyaalka taariikheed fadlan halaygu caawiyo
Akhriste - 2006-03-08 02:52:59
khadar - khadar_jk@hotmail.com
waa buug caajiba
Akhriste - 2006-01-31 00:23:18
faarah yuusuf jaamac - garaad_faarah@hotmail.com
Salaan Qaaliya kadib walaal waxaan idinka Codsanayaa inaad iga caawisaan micnaha buugan Socdaalkii dheeraa ee uu Qoray Axmed Guuleed waad mahad san tihiin saaxiibayaal
Akhriste - 2005-12-22 01:44:55
maxamed - jaais143@hotmail.com
aniga oo akhriyay buugan waxaan doonayaa inaan sidii aan uga faa idays day ay dadka uga faadiday
Akhriste - 2005-11-09 08:24:54
mowliid - mshide26@hotmail.com
salaan kaddib fadlan cidda buugaagta iibkooda ka masuulka ahi si dagdag ah haylasoo xidhiidho waayo waxaan aad iyo aad ugu baahanahay inaan buugaag afsoomali laga barto helo si aan secondary school ugu dhigo markaa lacagtiina waa diyaar ee fadlan e-mailkan igalasoo xidhiidha: mshide26@hotmail.com thanks.
Akhriste - 2005-11-05 08:41:28
maxamed - bile06@hotmasil.com
waxaan doonayaa taariikhda somalilad
Akhriste - 2005-10-14 11:08:11
nimcaan - libaax2005@hotmail.co.uk
walalyaal waxaan idiinka faaloonayaa dhalin yarada ku nool dalkan oo aad dhaqankoodu u baaba'ay maxaad ka odhan lahaydeen